Layaabka aduunka: Wiil 6 sanno jir ah oo Kufsadey 5 Jir ay ilmo-adeer yihiin. ~ RAYO TV BORAMA
By rayo tv at 3:17 AM Layaabka Dunida No comments
Dalka Malaysia ayaa waxaa ka dhacdey dhacdo aad dadka dalkaasi uga yaabisey & Aduunka intiisa kaleba , intii dhacdadaan Warbaahinta ka daawatey,dhacdadaan ayaa la aaminsan yahay ineey tahay tii ugu horeeysey oo ayadoo kale ah Aduunka ka dhacdey.
Baaritaan dhanka Caafimaadka ah oo Kuala Lumpur lagusameeyey ayaa lagu Xaqiijiyey in Saqiirkaan 6 Sanno jirka ah uu u Galmoodey Saqiiradaan 5 Sanno jirka ah ee ay Ilmo-adeerka yihiin.
Ayeeyda Labadaan Saqiir ayaa u soo gashey Ayagoo wada Qaawan Labadaan Wiilkuna Sareeyo Hab-tarankoodana isku jiro , kadibna ay aad arintaasi u shaki gelisay.
Hooyadii dhashay Gabadha ayaa Booliiska ka Ribook-gareeysey kadib markii Hooyadeed u sheegtey wixii ay aragtey , inkastoo Hooyada Gabadha dhashey eeyna Booliska ka codsan in dhacdada Baaritaan ku sameeyaan wiilkana talaaba kaqaadaan.
Dhakhtar Dhacdada ka hadley ayaa sheegey ineey u badan tahay Wiilka inuu Daawadey (pornograghic Video) waa Video-ga Dadka isku Galmoonaaya Laga duuba , Taasi oo sabab u noqon karta Cunuga inuu ku Daysado.
Maalin kadib markii Dhakhtaradii Maaritaanka sameysey ay sheegtey in Caruurtaan isku Galmoodeey ayay Hooyadii dhashay Gabadha Booliiska Ka Riboot-gareeysey inkastoo ay sheegtey keliya ineey iska Go,aansatey ineey Booliska Dhacdada u sheegto lakiin ula geedkeeda ahayn in Wiilka Dacwad lagu Qaado.
“Ciqaabta Qof wayn uu Danbigaan ku muteeysan karo, waxaa haboonan lahayd in lagu qaado Waarid kasta oo Ubadkiisa Dhaqanka oo kale ku kaca , waayo Waaridka waa jaawib saaran Tarbaatinta Ubadkiisa ayuu yiri Dhakhtar u hadley Isbitaalkii Baaritaanka LAgu sameyo